အမည် - တင်စိုးဝင်း
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - Pearl Condo, Building C
ဖုန်းနံပါတ် - 09 799 647886
eMail - tinsoewynn70@gmail.com
ခေါင်းစဉ် - Safety နှင့် မကိုက်ညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို စစ်ဆေးပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ Asia Express Co.,Ltd၊ ပုလဲကွန်ဒို တိုက် (C) ထံသို့ ဖော်ပြပါအချက်များအား အခန်းရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ၃၀.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(က) ဓါတ်လှေကား Control စနစ်အား လဲလှယ်ခြင်း၊ ARD စနစ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ Emergency Light တပ်ဆင်ခြင်း၊ Ventilation Fan လဲလှယ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ Access Card စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) လျှပ်စစ် Service Wire များနှင့် Meter Main Panel အတွင်းရှိ Wire များ မီးဘေး အန္တရာယ်၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန (EI) ၏ စစ်ဆေးမှုခံယူ၍ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်။
(ဂ) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် အခန်းရှင်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်လတစ်ခါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။
အမည် - Kyaw Thu Lin
ဝန်ထမ်း/ရာထူး - Company Staff
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - No.52,Shwe Bone Thar ( Middle Block ), Pabedan Tsp,Ygn. Myanmar.
ဖုန်းနံပါတ် - 09-41658070
eMail - thet.kyaw7@gmail.com
ခေါင်းစဉ် - သာသနာ့မြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်များကိစ္စ။
အကြံပြုချက် - သာသနာ့မြေပေါ်တွင် ကျူးကျော်များအား မည်ကဲ့သို့ရှင်းလင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာဖြစ်သည့် အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အမှတ်(၅၂)သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ရာ ဦးကျော်သူလင်း ဆိုသူမှာ နေထိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း email လိပ်စာ thet.kyaw7@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ၄င်းအနေဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ အမှတ်(၄၈)ရပ်ကွက် မြေတိုင်းမြေကွက်အမှတ် ၄၈ U10 တွင် ဂရံရရှိထားပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာတွင် ကျူးကျော်ရှိနေ၍ သာသနာမြေကျူးကျော်မှုအား မည်ကဲ့သို့ ရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုကြောင်း အကြံပြုချက် တောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိ၌သည်။
အဆိုပါ ကျူးကျော်ရှင်းလင်းရန်မှာ ဂရံမြေဖြစ်သည့်အတွက် မြေကွက်အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူမှ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် တရားမမှုဖြင့် ဦးတိုက်လျှောက်ထားခြင်း၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းတိုကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။ ။
အမည် - Sharr
ဝန်ထမ်း/ရာထူး - To respective personnel
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - 37, Ar Thaw Ka Street, Tarmwe, Yangon
ဖုန်းနံပါတ် - 095407774
eMail - zinmiesharr@gmail.com
ခေါင်းစဉ် - What is the procedure for land owner's fees collection to apartment owner?
အကြံပြုချက် - Dear YCDC, We would like to know the correct procedures for collection of fees by land owner to flat owner. Is thereastandard fee or receipt format? Because the receipt we received does not have the stamp duty or the information of the land owner. Thanks.
တိုက်ခန်းပိုင်က မြေရှင်ကိုပေးခြင်းသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြေငှားခမဟုတ်ပါကြောင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြေငှားခကိုမြေပိုင်ရှင်အမည်ဖြင့်သာ စည်းကြပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်မတီ၏ စည်းကြပ်ပြေစာသည် Stamp Duty ကပ်ခြင်းမရှိသည့် ကော်မတီ၏ တရားဝင်ပြေစာဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
အမည် - ဦးကျော်ဇေယျာဝင်း
ဖုန်းနံပါတ် - 09964007533
ခေါင်းစဉ် - လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်
လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျောက်ထားရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား YCDC ၏ Webportal ရှိ Online လိုင်စင်လျောက်ထားခြင်း Webpage ၏သိကောင်းစရာ ကဏ္ဍတွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
လိုင်စင်ကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏပေါ်မူတည်၍ အနိမ့်ဆုံး ကျပ် (၈၀၀၀) မှ ကျပ် (၁၀)သိန်းထိ (၂၂)ဆင့် သတ်မှတ်၍ စည်းကြပ်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကြီးမားသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ၍ လိုင်စင်ကြေး (၁၀)သိန်းအထက် စည်းကြပ်ကောက်ခံလျက် ရှိပါသည်။
အမည် - ဒေါ်ဝင်းပပ
ဖုန်းနံပါတ် - 09251160655
ခေါင်းစဉ် - တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ခြင်းအား အရေးယူပေးပါရန်
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ (၇၉)ရပ်ကွက်, မြေကွက်အမှတ် (၉၅၅)တွင်တရားမဝင် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခြင်းအား စည်ပင်ဥပဒေ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားစာအား အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့သော အဆောက်အအုံများပိုင်ရှင်အား ပုဒ်မ (၆၈)၊ ပုဒ်မ (၆၉) ဖြင့် တရားစွဲဆို အရေးယူထား ကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်း/ရာထူး - Geo Spatial Consultant
ဝန်ကြီးဌာန/ကုမ္ပဏီအမည်- Singapore Land Authority
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - kyawsoelinnksl@gmail.com
ဖုန်းနံပါတ် - +6591698061
ခေါင်းစဉ် - How can I join YCDC?
အကြံပြုချက်-Dear respective person, I amagovernment officer working under Singapore Government. I would like to contribute the experience I got from Singapore government. So, may I know how can I join YCDC?
Thank you for your offer. We inform the departments of YCDC that are using GIS system.
အမည် - တင့်လင်းထွန်း
ဝန်ထမ်း/ရာထူး - ဆရာဝန်
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ - ၉၇၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်
ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၉၇၀၅၅၅၇၀၅
ခေါင်းစဉ် - ကားလမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ပူးပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့် ၂၆-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် လမ်းမတော်လမ်း(အလယ်) တွင်ရပ်ထားသော ယာဉ်များအား စာရင်းကောက်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရပ်ခွင့်ရှိသော ကားပါကင်တွင် ကြာရှည်ရပ်တန့်ထားသည့် ယာဉ် (၆) စီး၏ ပိုင်ရှင်များအား မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ခေါ်ယူကာ ယာဉ်များအားကြာရှည်စွာ ရပ်တန့်ထားပါက စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေ (၆၃) (ဍ) ကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယာဉ်များအား ကုန်တင်/ကုန်ချ ပြုလုပ်ပြီးပါက ပြန်ထွက်ရန် ရှင်းပြခဲ့ပြီး (၂၈-၇-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ စတင်အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့များသည် (၂၈-၇-၁၆) နှင့် (၄-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့တို့တွင် လမ်းမတော်လမ်း တလျှောက် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်တန့်ထားသောယာဉ်များကို စစ်ဆေးအရေးယူခဲ့ရာတွင် စည်းကမ်းမဲ့ (၂) ထပ်ရပ်ထားသောယာဉ် စုစုပေါင်း (၅) စီး ကိုအရေးယူခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အကြံပြုစာပါအတိုင်း လမ်းမတော်လမ်းတလျှောက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တန့် ထားသောယာဉ်များ နှင့် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်တန့်ထားသောယာဉ်များအား ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု နှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်ကြားအပ်ပါသည်။
ယနေ့ကြည့်ရှုသူ - 29 ဦး
ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း - 3034433 ဦး